I-China Electric Heating eye washer Factory, Electric Electric eye eye washer Supplier
I-BH36-1066 yokushisa kagesi yokugeza iso
l Izinto: Umzimba omkhulu insimbi engagqwali engu-304, igobolondo le-ABS elilolonga ilangabi. l Ukuhlanza amehlo: ingcindezi yokusebenza 0.25-0.6MPA. Phusha isibambo uvuleke, futhi amanzi e-eyeosash eyewash azofuthwa ngomzuzwana owodwa. Ukuphakama kanye ne-engeli yesitolo samanzi kuklanywe ngokuya ngobuso bobuso bomuntu. Izinga lokugeleza kwe-eyewash lingu- ≧ 11.4L / min. l Ukugeza: Donsa isigwedlo sokudonsela phansi, bese amanzi eshawa ezofafazwa kusuka kubheseni lokugeza kungakapheli umzuzwana owodwa, futhi isilinganiso sokugeleza kweshawa ngu- .7 75.7L / min. Okubi ...
I-BH32-1062B yokushisa kagesi okugeza iso
l Izinto: Umzimba omkhulu insimbi engagqwali engu-304, igobolondo le-ABS elilolonga ilangabi. l Ukuhlanza amehlo: ingcindezi yokusebenza 0.25-0.6MPA. Phusha isibambo uvuleke, futhi amanzi e-eyeosash eyewash azofuthwa ngomzuzwana owodwa. Ukuphakama kanye ne-engeli yesitolo samanzi kuklanywe ngokuya ngobuso bobuso bomuntu. Izinga lokugeleza kwe-eyewash lingu- ≧ 11.4L / min. l Isihlungi se-Eyewashing: isihlungi se-high-density PP + 304, esingakwazi ukuhlunga ukungcola emanzini, futhi amanzi afuthwayo yi-aerosol, imboza futhi i-ge ...
I-BH32-1066 yokushisa kagesi yokugeza iso
l Izinto: Umzimba omkhulu insimbi engagqwali engu-304, igobolondo le-ABS elilolonga ilangabi. l Ukuhlanza amehlo: ingcindezi yokusebenza 0.25-0.6MPA. Phusha isibambo uvuleke, futhi amanzi e-eyeosash eyewash azofuthwa ngomzuzwana owodwa. Ukuphakama kanye ne-engeli yesitolo samanzi kuklanywe ngokuya ngobuso bobuso bomuntu. Izinga lokugeleza kwe-eyewash lingu- ≧ 11.4L / min .. l I-valve ye-Ball: Ivalve yebhola enezicucu ezimbili ingenza ukugeleza kwamanzi kwensimbi ye-eyewash kuhlangabezane nezinga laseMelika. l Umhlangano wokugeza iso: Wenziwe ngama-30 ...
BH30-1062B Ukushisa kwe-Electric eyewash eye / face wash
l Izinto: Umzimba omkhulu insimbi engagqwali engu-304, igobolondo le-ABS elilolonga ilangabi. l Ukugeza: Donsa isigwedlo sokudonsela phansi, bese amanzi eshawa ezofafazwa kusuka kubheseni lokugeza kungakapheli umzuzwana owodwa, futhi isilinganiso sokugeleza kweshawa ngu- .7 75.7L / min. Ingcindezi yokusebenza ingu-0.25-0.4MPA. l Ukuhlanza amehlo: ingcindezi yokusebenza 0.25-0.6MPA. Phusha isibambo uvuleke, futhi amanzi e-eyeosash eyewash azofuthwa ngomzuzwana owodwa. Ukuphakama kanye ne-engeli yesitolo samanzi kuklanywe ngokuya ngobuso bobuso bomuntu. Iso ...
Iwashi uqobo linomsebenzi wokulandela umkhondo wokushisa, ukwahlukanisa kanye nokuvimbela ukubanda, ukuze izinga lokushisa lamanzi lesistimu yewashi ligcinwe lishisa njalo. Idivayisi yokushisa: ibhande lokulandela ugesi elingeniswa njalo lokushisa lingeniswa futhi lifakwe ngohlelo lokulawula ukushisa okuzenzakalelayo ukulawula ukushisa kokushisa. Izinto zokuvala umoya ungqimba: imvelo yenjoloba enobungane. Cover: isixwayiso yellow impahla ABS, ukumelana ukugqwala by amakhemikhali ahlukahlukene.